जाडोमा पानी तताउन सोलार राख्ने कि इलेक्ट्रिक गिजर ! - jagritikhabar.com
जाडोमा पानी तताउन सोलार राख्ने कि इलेक्ट्रिक गिजर !
न्यानो सकिएर चिसो बढिसक्यो। काठमाडौंको तापक्रम दिनकै घट्दो पनि छ। पाका उमेरका र केटाकेटीका साथै बिहान-बेलुका दैनिक नुहाउनेलाई चिसो पानी थेग्न अब मुश्किलै हुन्छ। ठिहिर्‍याउने पानीमा भाँडा माझ्न र भान्साको काममा पनि कम्ता सकस हुँदैन।
त्यसैले हामीले विभिन्न किसिमका घरायसी सामान उपलब्ध गराउने एभ्रिघर प्रालिका निर्देशक राजेश ढकाललाई सोलारबारे सोधेका छौं। एभ्रिघरले अल्ट्रासन ब्रान्डको सोलार बिक्री-वितरण गर्छ। अहिले नेपालमा पाइनेमध्ये सबभन्दा गुणस्तरीय सोलार अल्ट्रासन नै भएको ढकाल बताउँछन्। अल्ट्रासनले बीस वर्षभन्दा धेरै वर्षदेखि सोलार बनाइरहेको छ।
‘तामाको ट्युब भएका सोलार प्यानलले अर्कोको तुलनामा राम्ररी काम गर्छ। अनि मधुरो घाममा पनि अल्ट्रासन सोलारले राम्ररी पानी तताउन सक्छ,’ उनले भने, ‘अल्ट्रासनको अर्को फाइदा भनेको ट्यांकी क्षमता लोकल सोलारको भन्दा धेरै छ।’
‘अल्ट्रासन सोलारमा पानी तातो राख्ने थर्मस भनौं न, त्यो राम्रो भएकाले बाहिर धेरै चिसो भए पनि तातोपन रहिरहन्छ,’ ढकालले भने, ‘धेरै चिसोमा पनि दिउँसो तातेको समयको तापक्रमभन्दा दुई-तीन डिग्री मात्रै कम हुन्छ।’
‘हामीले धेरै ठाउँमा यो समस्या देखेका छौं। थुप्रै ग्राहकका घरमा लोकल हटाएर अल्ट्रासन सोलार पनि राखिसक्यौं,’ उनले भने। निर्देशक ढकालका अनुसार अल्ट्रासन ट्यांकी धेरै वर्ष टिक्छ। यसको वारेन्टी नै १५ वर्ष दिइन्छ।
‘घरमा कति लिटरको ट्यांकी चाहिन्छ भनेर हामीले परिवारका सदस्य र कतिवटा बाथरूममा प्रयोग गर्ने हो भन्ने बुझेर सुरूमै सुझाएका हुन्छौं,’ उनले भने, ‘जस्तै चार जना हुनुहुन्छ भने चार सय लिटरको ट्यांकी चाहिँदैन। दुई सय-दुई सय पचासको भए हुन्छ। धेरै मान्छे भएका बेला हाइब्रिड प्रणाली चलाउँदा भइहाल्छ।
‘हामी घरमै गएर सोलार फिट गरिदिन्छौं। सोलार एकपटकको लगानीमा धेरै समय चलाउन सकिन्छ,’ उनले भने।
‘ग्यासबाट चल्नेभन्दा बिजुलीबाट चल्ने गिजर धेरै सुरक्षित हुन्छ,’ ढकालले भने। एभ्रिघरले क्रम्पटन कम्पनीको इलेक्ट्रिक गिजर बिक्री-वितरण गर्छ। भारतीय कम्पनी क्रम्पटन घरायसी सामग्रीका लागि लोकप्रिय छ।
‘क्रम्पटनका गिजरले कम बिजुली खपत गर्छन् र टिकाउ पनि छन्,’ उनले भने। क्रम्पटन गिजर ३, १०, १५, २५, ३५ र ५० लिटरसम्मका पाइन्छ। आफूलाई आवश्यक भएअनुसार जोड्न सकिन्छ। उनका अनुसार यसको भित्री ट्यांकीमा ५ देखि ७ वर्षसम्मको वारेन्टी हुन्छ।
यसमा धेरै झमेला पनि छैन। बाथरूममा लगेर जोड्यो, बिजुली अन गर्‍यो, चाँडै पानी तातिहाल्छ। फ्ल्याटमा बस्नेहरूलाई जाडोमा कुचुरकुचुर इलेक्ट्रिक जग वा भाँडामा पानी तताउने सास्तीको विकल्प इलेक्ट्रिक गिजर नै भएको ढकाल बताउँछन्।
गिजरको मूल्य भने क्षमता र मोडल हेरेर फरक फरक हुन्छ। क्रम्पटन गिजरको मूल्य लिटर हेरेर ९ हजार ९ सय ९७ रूपैयाँदेखि २९ हजार ९ सय ९७ हजार रूपैयाँसम्म पर्छ।